Maradona: Van Gaal Waa Shaydaanka Ugu Weyn Adduunka
HomeWararka MaantaMaradona: Van Gaal Waa Shaydaanka Ugu Weyn Adduunka
Diego Maradona ayaa weerar ku qaaday tababaraha Manchester United ee Louis van Gaal kaas oo uu ku tilmaamay shaydaan.
Maradona oo ka cadhaysan sida uu Van Gaal ula dhaqmo xiddiga kooxdiisa ee Ramadel Facao ayaa waxa uu sheegay in dadku ay moodaan tababarahan nin naxariis badan hase yeeshee ay xaqiiqadu tahay in uu yahay nin aad u xun oo shaydaan ah.
“Vaan Gaal ma aha nin wanaagsan, waxa uu cid walba oo kale uga dhow yahay shaydaanka.” Sidaas ayuu yidhi Diego Maradona oo koox wariyeyaal ah ugu warramayay waddanka Colombia oo uu hadda ku sugan yahay.
“Koobkii adduunku wuu fiicnaa, waxaanay ila tahay in qof walbaa tebayey in Colombia uu ku jiri lahaa Falcao marka James Rodriguez iyo Juan Cuadrado ay kubadda hayaan. Haddii Falcoa uu halkaa joogi lahaa, Colombia waxay u dabbaal-degi lahayd koobkii adduunka ee ugu horreeyey ee ay ku guuleysato.” Ayuu raaciyey Maradona.
Diego Armando Maradona waxa uu sheegay in Falcao ay la soo derseen dhaawacyo xun kuwaas oo ku kellifay in uu yimaado England, isla markaana ay ahayd in loo dulqaato inta uu kooxda la qabsanayo.
Diego waxa kale oo uu ereyo amaan ah u jeediyey laacibka reer Colombia ee James Rodriguez oo ka rirsan ciyaartooyada Real Madrid, waxaanu ku tilmaamay ciyaartoy hibo-maskaxeed leh oo lugta bidixda si fiican u adeegsada.
“James waa ciyaartoy maskax badan oo lug bidixle ah. Waa nin qurux badan, waxaanu gaadhi doonaa horumar sida ciyaartooyo badan oo bidixleyaal ahaa.”
Falcao oo ay Manchester United sannad amaah ah kaga soo qaadatay Monaco ayaa waxa uu u saftay 12 ciyaarood oo lagu bilaabay, waxaanay u muuqataa in uu meesha ka baxayo heshiis rasmi ah oo la filayey in ay Manchester United kula wareegto.
Hadalka Maradona ayaa soo baxay maalmo yar uun kadib markii uu xiddiga Faransiiska ah ee Frank Ribery kaas oo ku tilmaamay Van Gaal in uu yahay shakhsi xun oo ay garashadiisu liidato.
Ferdinand Oo Si Adag U Weeraray John Terry, Kuna Tilmaamay Doqon Liitta
14/09/2014 Abdiwahab Ahmed
Minnesota Timberwolves Oo Dhibic Kaliya Kaga Guuleysatay Phoenix Suns